Oghere Brunch kacha mma nke Kildare - IntoKildare
Ihe Zoro Ezo, Nri na Ṅụọ, Atụmatụ Obodo
Enweghị ihe ọ bụla dị ka ezigbo brunch na ngwụsị izu.
N'adịghị ka nri ụtụtụ ị na -akụda n'izu, brunch bụ ihe ekwesịrị ka ejikọ ya na ezigbo ndị enyi yana ikekwe… mimosas ole na ole.
Anyị achịkọtala ebe ise kacha mma maka brunch na ngwụsị izu a.
Ndị Gallops - Kildare House Hotel
Biputere Kildare House Hotel 🌸 (@kildarehousehotel)
The ọkụ na nnabata ikuku na The Gallops of Dalọ nkwari akụ Kildare na-eme ka ọ bụrụ ebe zuru oke maka brunch na-atụrụ ndụ
Ọ dị na etiti obodo Kildare, anyị na -akwado akwa nsen Florentine ma ọ bụ ụtọ French Toast ha nke ejiri maple sirop na anụ ezi na -atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ọ na -adị gị ụtọ.
Biputere Taim AlFalasi kesara تيم الفلاسي | 🇦🇪 (@taimalfalasi)
Ịzụ ahịa n'oge? Nweta nri oge dị ụtọ na Obodo Kildare, na menu maka uto ọ bụla.
Nke a bụ ebe mara mma iji nwee ọmarịcha nri na mmanya Italiantali na ihu ụtọ na ihu enyi.
Na nso obodo Kildare na etiti obodo Kildare, gịnị ma ị pụọ wee nwee Irish zuru ezu maka brunch? Nke Silken Thomas Ọ bụghị naanị na ịnwe menu nri ụtụtụ mara mma kamakwa nhọrọ nhọrọ ahụike nke gụnyere mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ & ọkwá yogọt, ọkwá na-akasi obi nke porridge na scones dị ọhụrụ na-atọ ụtọ. Anyị chefuru ịkpọ ube oyibo na achịcha na-eko achịcha?
Ụlọ oriri na ọ Gardụ Gardụ ndị Japan
The Irish National Stud & Ubi
Biputere nke Natalie Collins (@japanesegardenscafe) kesara
Ọ dị n'ime Irish National Stud & Ubi, Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Japanese Gardens na-emeghe site na 9am ma na-anya isi n'inye nri dị mfe ma dị mma na-emesi ike na ịdị ọhụrụ na ụtọ.
Ọbụghị naanị na ha nwere nnukwu efere, achịcha na kọfị kamakwa ihe nke ha na -ewere Egg McMuffin a ma ama. Kedu ihe ị na -eche ?!
Mpempe akwụkwọ nke Brunch Brief kesara (@brunchbrief)
Ebe mara mma maka emume ọ bụla.
The mesiri ike na Dalọ ahịa Shoda Market dị na nri mara mma nke ọma, kọfị ọrụ nka na onyinye mmanya pụrụ iche. Nri kacha amasị anyị kwesịrị ịbụ pancakes nwere mkpụrụ osisi ọhụrụ, compote mkpụrụ osisi na Nutella.
Ihe Zoro EzoNri na ṄụọAtụmatụ Obodo
Top 4 Kildare Spa na-ekwe nkwa itinye mmiri n'ụkwụ gị n'oge a